रुखो पाखोमा रसिलो 'ड्रागन फ्रुट'
कृष्णमुरारी भण्डारी बुधवार, असार २८, २०७४ 117850 पटक पढिएको
डा. सूर्यप्रसाद पाण्डे अचम्मको 'ड्रागन फ्रुट' को व्यावसायिक खेती नेपालमा सम्भव छ र यसको खेती यसरी गर्नुपर्छ भनेर विज्ञान, प्रविधि र तौरतरिका मात्र होइन, प्रदर्शन गरेरै साबित गरेका छन् । यी तिनै पाण्डे हुन्, जो नेपालमा नयाँ फलफूल खेती सुरुआत गर्ने भनेर प्रख्यात छन् ।उनी नयाँ परिचय दिइरहनुपर्ने व्यक्ति पनि होइनन् । ज्यादै महँगो किवी फलको नेपाली नाम ठेकी फल हो र यो नेपालको रैथाने फल हो भनेर उनैले खोजी गरेर पत्ता लगाएका हुन् । जो अहिले देशव्यापी रूपमा फैलिइरहेको मात्रै छैन, नेपालबाट विदेश निर्यात पनि हुन थालेको छ ।
कृषि नै अध्ययन गरेका र कृषि कर्ममै रमाउने दाजु नै हुन् भनेर भाइहरूले मलाई हौस्याए । उनीहरूले भने, दाजु सूर्य, तिमीले पढेको र जानेको ज्ञानलाई बाबुआमाको रुखो थाँतथलोको विकास गर्न नेतृत्व गर । यही कामको लागि हरेक भाइले पाँच लाख रुपैयाँ बीउ पुँजीको रूपमा लगानी गर्न पनि सहमति जनायौं ।
अन्कनाएर नेतृत्व लिएँ मैले डा. पाण्डेले भने, किनभने यो ठाउँमा कृषि कर्म गर्न असाध्यै गाह्रो छ । भाइहरूले फुटेर होइन, एकजुट भएर दिएको जिम्मेवारीलाई कसरी नाइँ भनौं ? मैले चुनौती स्वीकार गरें- बाबुबाजेको थातथलो रुखो भएर के भयो ? विज्ञान, प्रविधि र स्थानीय ज्ञानबुद्धि लगाएर नमुना फार्म बनाउने !
डा. पाण्डेले चुनौती स्वीकारेपछि प्रकृतिले भार अरू थपिदिइन् । त्यसै पनि वर्षायामसमेत पानी नपर्ने 'रेन स्याडो' क्षेत्रमा पर्ने उनको जमिनमा पानीको समस्या हुने नै भयो । ०७२ वैशाखको भुइँचालोपछि खानेपानीको खोल्साको पँधेरो पनि सुक्यो ।
त्यसैले विद्यार्थी हुँदा पढेका, कृषि वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेका सफलता-असफलताका कुरा सम्झने, पढ्ने, छलफल गर्ने र इन्टरनेटको सहयोगमा आफ्ना चुनौतीका समाधानबारे म एकोहोरिएर लागिरहें । साथीभाइ र विज्ञहरूसँग सम्पर्क गरें । माटो जचाएँ । वार्षिक पानी पर्ने डाटाहरू खोजें । भूस्खलनबारे जानकारी लिएँ ।
माटो त के भन्नु, गेग्रान । जमिनको उर्वरा शक्ति परीक्षण गरें । एकदमै रुखो । माटोको विषयमै मैले पीएचडी गरेकोले आफ्नो जमिनको माटोको शक्ति के हो भन्ने जान्नको लागि निकै समय व्यतीत गरें । तापक्रम हिउँद वर्षामा कति हुन्छ भन्ने खोजी गरें ।
अन्त्यमा, म निष्कर्षमा पुगें ।
यो 'रेन स्याडो' अर्थात् वर्षामा पनि खासै पानी नपर्ने ठाउँ भएकाले यसको लागि विशेष प्रविधि चाहिन्छ । त्यसैले मैले यो ठाउँलाई पानी कम हुने ठाउँमा गरिने खेतीपाती, पशुपालन र जीवनयापनको लागि चाहिने अनुसन्धान गरेर सिद्धान्त निर्माण, प्रविधिको विकास र त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागिपरेको छु ।
यहाँको नम्बर एक समस्या भनेको नै पानी हो । त्यसैले यसको लागि वर्षाको पानी संकलन गरेर वर्षभरि प्रयोग गर्ने प्रविधि अपनाइएको छ । रुखो पाखोमा चिस्यान कायम राख्नेलगायतका प्रविधि विकास गरिएको छ ।
दोस्रो समस्या भनेको, यहाँको माटोको उर्वराशक्ति एकदमै कम छ । खासमा यहाँ त माटो भन्ने नै छैन । मात्र गिटी नै गिटी छ । ढुंगाको ग्यांग्रिङमा मल मिसाएर जति उत्पादन हुन्छ, आम्दानी त्यही हो ।त्यसैले यहाँको बाली सुक्खा खप्ने नै लगाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले मैले पानी थोरै चाहिने, थोरै मेहनत गरे पुग्ने तर उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने खेतीबारे खोजी गरें । यसको लागि अन्नबालीभन्दा फलफूल छनोट गरेको छु । अनि त्यस्ता बोटबिरुवा खोजेर त्यसको प्रविधि विकास गर्न लागेको छु ।
हामीले गरेको मध्ये एक अनार हो । यसमा सफल भइयो । यस्तो प्रतिकूल मौसममा पनि रसिलो अनार बोटले थाम्न नसक्ने गरी मज्जाले उत्पादन हुने रहेछ । त्यस्तै अनौठो फल ड्रागन फ्रुटको खेतीमा पनि सफलता पाइयो । यसले अब चमत्कार नै देखाउँछ भन्ने लागेको छ । जो आए पनि यो नयाँ फल देखेर छक्क पर्छन् !
मैले यो बिरुवाको फल खाँदा मात्र आनन्द आउने होइन, यसको बोटलाई हेर्दा पनि मन प्रसन्न हुने तरिका अपनाएको छु, जो लगानीको हिसाबले सस्तो पनि छ । विकसित सहर र उदाइरहेका गाउँलाई पनि यसबाट सेवा नै पुगेको छ । त्यो के भने, बागमती अञ्चलमा मात्र दस लाख मोटरसाइकल छन् । तिनको टायर फाल्ने ठाउँको अभाव छ, राजधानीमा । तर मैले किनेर त्यसैलाई प्रयोग गरेर ड्रागन फ्रुटका बिरुवालाई चित्ताकर्षक बनाएको छु ।
कोइरालाले सम्हालिन् प्रदेश प्रमुखको कार्यभार 33
१९ हजार निजामती कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने 581